'वामदेव चुनाव लड्ने निर्णय भएको छैन्, रामवीरले राजिनामा दिन जरुरी छैन्'
काठमाडौं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री एवम् नेकपाका स्थायी समिति सदस्य रघुवीर महासेठले आफ्नो पार्टीका नेता वामदेव गौतम चुनाव लड्ने भनेर पार्टीभित्र आधिकारिक निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
महासेठले सरकार अहिले संकटमा नभएको पनि जिकिर गरे । उनले भने,‘सरकार दुई तिहाईको छ । हामी दायाँ÷बायाँ नहेरी अब ५ वर्ष देश र जनताको हितमा काम गर्छौं ।’
उनले अबको पाँच वर्षभित्र वर्तमान सरकारले कसैले नसोचेको प्रगति र विकास गरेर देखाईदिनेपनि दाबी गरे । उनले भने,‘जनतासामू गरेका सबै प्रतिबद्धताहरु हामी पूरा गरेर छाड्छौं । आउने दश वर्षभित्र त नेपाल कहाँबाट कहाँ पुग्छ ? कसैले कल्पनापनि गर्न सक्दैन् ।’
उनले सकार गठन भएको यो करिब ८ महिनामा ईतिहाँसमै सम्झना हुने कामहरु भएकोपनि जिकिर गरे । उनले भने,‘हाम्रो सरकार गठन हुनुपुर्व मुलुकमा एकात्मक शासन प्रणाली थियो । तर, हामी आएपछि संघात्मक प्रणालीमा प्रवेश गरेको छ । स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारलाई आवश्यक कानुनहरु बनाउने काम हामीले गर्यौं । हामीले घोषणापत्रमार्फत अघि सारेका सबै कार्यक्रमहरु पूरा गर्छौं । तर, यसको लागि केही समय लाग्छ ।’
सरकारको कामप्रति असहमति जनाउँदै बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले संसदमा बोलेको कुराप्रति टिप्पणी गर्दै महासेठले भने,‘संसदमा उहाँले नेताभन्दापनि प्रतिनिधिसभा सदस्यको हैसियतले बोल्नुभएको छ । उहाँले बोलेको ठिक की बेठीक भनेर म अहिले टिकाटिप्पणी गर्न चाहँन्न । किनकी टिकाटिप्पणी गर्ने हाम्रो आफ्नै ठाउँ छ । हामी अहिले एउटै कमिटीमा बसिरहेका छौं । उहाँले ठिक बोल्नुभयो या बेठीक बोल्नुभयो भनेर यसबारेमा म आफ्नै कमिटीमा कुराहरु उठाउनेछु । तर, जुन कुरा संसदमा उठ्यो, चाहे उहाँमार्फत होस या अरुमार्फत, देशमा सरकार छ भनेर जनताले महशुस गरेनन भनेर । हो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू जनताप्रति बडो दृढताकासाथ प्रतिबद्ध भएर अगाडि बढिरहनुभएको छ। यो सरकारले जनतासामू गरेका सबै प्रतिबद्धताहरु समयमै पूरा गर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।’
काठमाडौंदेखि केरुङसम्मको प्रि–फिजिवीलिटी सम्पन्न भैसकेको जनाउँदै अब डिपिआर बनाउन थालिसकेको पनि उनले जानकारी दिए । मन्त्री महासेठले भने,‘त्यस्तै भारतसँग सहमति भए अनुसार विरगंज–काठमाडौं रेलमार्गको प्रि–फिजिविलीटी सम्पन्न भैसकेको छ । अब छिट्टै डिपिआर बनाउन लागिसकेका छौं । यो छोटो अवधिमा पनि हामीले यी नयाँ–नयाँ कामहरु गरेर ल्याएका छौं ।’
त्यस्तै उनले चालक अनुमतिपत्रको विषयमा पनि धेरै कुराहरु उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै अब त्यो अध्याय सकिएको विश्वास दिलाए । उनले भने,‘हामीले धेरैलाई व्यवस्थित गरिसकेका छौं । र, निकट भविष्यमा हामी ७ लाख (तिहारअघि) प्रत्येक नेपाली जसले अहिलेसम्म लाईसेन्स पाउनुभएको छैन, उहाँहरुको हातमा लाईसेन्स पुग्नेछ ।’
आफूहरु सरकारमा आउनेवित्तिकै नयाँ सरकारसँग समस्यै समस्या रहेको पनि उनले सुनाए । उनले थपे,‘विगतको सरकारले गरेको कमिकमजोरीको कारणले ८ खर्ब रुपैयाँको दायित्व हामीमाथि थपिएको थियो । जुन हामीले स्वेतपत्रमार्फत सम्पूर्ण नेपालीहरुको अगाडि ल्याईसकेका छौं । यो ७ महिनाभित्रमा हामीले स्थानीय, प्रदेश र संघ तीनै तहमा चाहिने नियम, कानून बनाउने काम गर्यौं । सबै ठाउँमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरेका छौं । सरकारको ध्यान अब विकास निर्माणतर्फ अघि बढेको छ । यो सरकार बनेको एक वर्षभित्र नेपाली जनताले विकास र समृद्धिको अनुभुति पाउँछन ।’
फरक प्रसँगमा उनले अहिले तराई विभाजनको कुरा उठिरहेकोप्रति कडा टिप्पणी गर्दै भने,‘जनताबाट तिरस्कृत भैसकेका व्यक्तिहरु मधेशलाई म छुट्टै देश बनाउँछु भनेर दम्भ देखाएर हिँडिरहेको छ भने त्यसमा कुनै दम छैन् । छुट्टै देश बनाउँछु भन्नेहरुलाई म भन्न चाहन्छु, आउनुहोस चुनावको प्रक्रियाबाट तपाई जनताको बीचमा आउनुहोस्, जनताले तपाईलाई के हाल बनाउँछन्, अनि थाहा पाउनुहुन्छ । र, बनाईसकेका छन् ।
त्यसकारणले न तराई कहिले छुट्टै देश कहिले थियो, न छ, यो नेपालको अभिन्न अंग हो । रहिरन्छ । देश टुक्र्याउँछु भन्नेहरुको पछाडि कुनैपनि मधेशी जनता जाँदैनन् । देश टुक्र्याउँछु भन्नेलाई मधेशी जनताले आगामी दिनमा के सजाय दिन्छ ? चुनावमा तपाईहरु हेर्नुहोला । सस्तो लोकप्रियताको लागि कसैले म नेपाल टुक्र्याउँछु भन्छ भने यसमा हामीले धेरै समय खर्च गर्नुपर्ने जरुरीनै म देख्दिन् । किनकी त्यसमा कुनै सत्यता छैन्।’